Home News Xildhibaanada Baarlamaanka oo Go’aan cad ka qaatay Kheeyre iyo Duulaan Mooshin oo...
Xildhibaanada Baarlamaanka oo Go’aan cad ka qaatay Kheeyre iyo Duulaan Mooshin oo bilabanaya ka dib Magacaabistii Xalay!!
R/wasaare Xassan cali kheeyre ayaa waxaa uu xalay saqdii dhexe magacaabay Golaha wasiiradda ee ka maqnaa Xukumadiisa kuwaasi oo 12-ka mid ah ay ahaayeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya .
Xildhibaanadda Baarlamaanka soomaaliya qaarkood oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxaa ay isku raaceen in mooshin deg deg ah laga diyaariyo R/wasaare Xassan cali kheeyre.
Sababta ugu weeyn ee mooshinka ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay balan ka bax weeyn oo uu sameeyay R/wasaare Kheeyre taasi oo ah in Kursi walbo oo uu xalay magacaabay in uu u balan-qaaday ku dhawaad 10-Xildhibaan .
Xildhibaanadda Mooshinkaasi Abaabulaayo qaarkood ayaa waxaa ay wacad ku mareen in ay dhiraan dhirin doonan Xil ka qaadista R/wasaare Xassan Cali Kheeyre,waxaana suuragal in kullankaani hadda la abaabulaayo uu noqdo kii ugu dambeeyay ee Kheeyre lagu bixin lahaa.
13-Wasiir,wasiir ku xigeen,wasiiru dowle xalay la magacaabay ayaa waxaa ay aheeyeen dhamaantood marka laga reebo daahir Maxamuud Geelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuwaasi oo kheeyre damacsan yahay in uu difaac ka dhigto